ချောမောခန့်ညားတဲ့ချစ်သူလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေသိအောင်အကြွားပို့စ်လေးတစ်ခုတင်ပြီးပြောပြလာတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ - Media Update News
ချောမောခန့်ညားတဲ့ချစ်သူလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေသိအောင်အကြွားပို့စ်လေးတစ်ခုတင်ပြီးပြောပြလာတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ
ပရိသတ်ကြီးရေ Facebook Cele မလေး ပန်ကိတ်ဒါဒါကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီး သားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် .။
ပန်ကိတ်ဒါဒါကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူ သ ပါ ။ Relationship တစ်ခုမှာ နာကျင်စရာ အမှတ်တရတွေ
ပြည့်ခဲ့ပေ မယ့် ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာနဲ့ပဲ နေ့ရက်တိုင်းကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာ မာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့သူ ပန်ကိတ်ဒါဒါက ဒီကနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံးအရာတွေ
ဖြစ်ခဲ့ရလို ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပိုစ့်လေးကို အခုလိုပဲ တင်လာခဲ့ပါတယ်. ။ “Congratulations to me . အရမ်းလိုချင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ရတော့ ပျော် ပြီကွယ် .။ ဒီနှစ်တော့ လိုချင်တဲ့
အလုပ်လည်းရ အရမ်းချောတဲ့ ရိ န်းဇားလည်းရ နဲ့. ။ ပျော်လိုပါ ။ စိတ်ဓာတ်တွေ ကုန်းကောက်မ ရအောင် ကျခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေ ကုန်လွန်ပြီ ထင်ပါတယ် ။
ကျလာခဲ့ ရင်လည်း ပြန်ကောက်ကြတာပေါ့ နော်။ #ကြွားတယ်ထင်ရင် လည်းကြွားပါရစေပိလိစ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်. ။
အဖြစ်ချင်ဆုံးလေးတွေ ဖြစ်ခွင့်ရလို ပျော်ရွှင်နေသူ ပန်ကိတ်ဒါဒါ အတွက် ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေးတွေ ပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်. ။
Source: Ya Min Oo’s Fb
ေခ်ာေမာခန႔္ညားတဲ့ခ်စ္သူေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ပရိတ္သတ္ေတြသိေအာင္အႂကြားပို႔စ္ေလးတစ္ခုတင္ၿပီးေျပာျပလာတဲ့ ပန္ကိတ္ဒါဒါ
ပရိသတ္ႀကီးေရ Facebook Cele မေလး ပန္ကိတ္ဒါဒါကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး သားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ .။ ပန္ကိတ္ဒါဒါကေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈေတြကို အျပည့္အဝ ရရွိထားသူ သ ပါ ။ Relationship တစ္ခုမွာ နာက်င္စရာ
အမွတ္တရေတြ ျပည့္ခဲ့ေပ မယ့္ ေပ်ာ္႐ႊင္တက္ႂကြစြာနဲ႔ပဲ ေန႔ရက္တိုင္းကို စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခိုင္မာ မာနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့သူ ပန္ကိတ္ဒါဒါက ဒီကေန႔ေလးမွာ သူမရဲ႕ အျဖစ္ခ်င္ဆုံးအရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရလို ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့ပိုစ့္ေလးကို အခုလိုပဲ တင္လာခဲ့ပါတယ္. ။ “Congratulations to me . အရမ္းလိုခ်င္ခဲ့တဲ့
အလုပ္ရေတာ့ ေပ်ာ္ ၿပီကြယ္ .။ ဒီႏွစ္ေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ အလုပ္လည္းရ အရမ္းေခ်ာတဲ့ ရိ န္းဇားလည္းရ နဲ႔. ။ ေပ်ာ္လိုပါ ။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကုန္းေကာက္မ ရေအာင္ က်ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ကုန္လြန္ၿပီ ထင္ပါတယ္ ။ က်လာခဲ့ ရင္လည္း ျပန္ေကာက္ၾကတာေပါ့ ေနာ္။ #ႂကြားတယ္ထင္ရင္
လည္းႂကြားပါရေစပိလိစ္” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္. ။ အျဖစ္ခ်င္ဆုံးေလးေတြ ျဖစ္ခြင့္ရလို ေပ်ာ္႐ႊင္ေနသူ ပန္ကိတ္ဒါဒါ အတြက္ ပရိသတ္ႀကီးလည္း အားေပးစကားေလးေတြ ေျပာေပးခဲ့ပါဦးေနာ္. ။
Previous Article ပရိတ်သတ်တွေအပေါ် အချိန်အကြာကြီးပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို ဒီကနေ့မှာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချော ကျော်ဆု
Next Article သူမကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပုံဖော်ထားတဲ့သီချင်းကို သရော်ပြီးဝေဖန်နေတဲ့သူအား ပြတ်ပြတ်သားသားသတိပေးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်